Round Two – Purple Feminist Group
HomeBlogArchive by Category "Round Two"
Written by NanolabsFebruary 23, 2022
Featured Selection – Ying Sam Thiri
Feminist Literature Competition (Round 2)
ကျွန်မ နဲ့ ကျွန်မအိမ် အိမ်လို့တွေးတော့ ဘဝရဲ့မိုင်တိုင်တစ်ဝက်လောက်ကို ခြေသလုံးအိမ်တိုင် လှည့်နေခဲ့ရတော့ ခက်မာစိတ်ထဲ့မှာ အိမ်တစ်မျိုးတစ်ဖုံကို တိတိကျကျ ပုံဖော်ရခက်လှသည်။ နာကျည်းအိမ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးတစ်လုံးကတော့ မသိစိတ်ထောင့်တစ်နေရာမှာ ညှောင့်ခနဲ့ လာဆူးသလို။ ခက်မာ ဆယ်တန်းအရွယ်မတိုင်ခင်အထိ ရွှေပေါ်မြတင် ပလ္လင်ထက်မှာ ဖူးဖူးမှုတ်ထားတတ်သော အဘိုးအဘွားတို့နဲ့ ကြီးပြင်းရသည်။ ပင်စင်စားဆေးရုံအုပ်ကြီးဖြစ်သော အဘိုး နဲ့ စော်ဘွားမျိုးနွယ်မှဆင်သက်လာသော အဘွား၏ဂုဏ်အရှိန်အဝါကြောင့် အိမ်ကလေး၏အရိပ်အာဝါသမှာ လုံခြုံလှသည်။အဘိုးနဲ့ အဘွားကို ပြုလုပ်ကျွေးမွေးနေသော အဒေါ်အပျိုကြီး ကလည်း စည်းကမ်းကြီးသလောက် မိဘနဲ့ခွဲနေရသော မြေမလေးတွေမို့ သိမ်ငယ်စိတ် တစ်စုံတစ်ရာ မပေကျံရအောင်လည်း ဂရုစိုက်နွေးထွေးပေးရှာပါသည်။ ထိုနယ်မြို့လေးမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းကြီး ပြင်းလာခဲ့ရသော ဆယ်ကျော်သက် အိမ်မက်ဆန္ဒကလေးမှာလည်း ရိုးရှင်းလှသည်။ အသက်ကြီးလာလျှင် မှိန်ဖျော့ နူညံ့သော ဆေးရောင်တစ်မျိုးသုတ်ထားသော ကိုယ်ပိုင်အခန်းလေးလိုချင်သည်။ ပန်းသေးသေးနုပ်နုပ်ကလေးတွေ ကျဲထားသော ခန်းဆီးစကလေး လေပြင်ညင်းမှာ လှပ်သွားတိုင်း မိုးသက်မြေသင်း ရနံ့ကလေးနဲ့အတူ ကျိုးတိုကျဲတဲပွင့်တတ်သော စံပယ်ရုံဖြူကလေးကို တွေ့ရမည်။ ဘောပင်ထည့်ခွက်ကလေးကလွှဲပြီး ရှင်းလင်းနေသော စာကြည့်စားပွဲကလေး တလုံးထားမည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်နံရံတွင် စာရေးရင်း စိတ်တွေမွန်းကြပ်လာလျှင် ဝင်ပုန်းပျောက်ကွယ်သွားလို့ရမည့် ပင်လယ်ပြာလှိုင်းကြက်ခွပ်ပိုစတာလေးကပ်ထားမည်။ ခုတင်ခေါင်းရင်းမှာတော့ဝါးနံ့ကလေးသင်းတတ်သော စာအုပ်လေးတွေ စီစီရီရီသိမ်းစရာ စာအုပ်စဉ်ကလေးထားမည်။ နေ့စဉ်ဘဝမှာ သာမန် ရုံးသွားရုံးပြန်အလုပ်လုပ် အချိန်တန်အိမ် ၍စာရေးစာဖတ်လုပ်လို့ရသော ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခန်းလေး ရှိရုံနဲ့ ရောင်ရဲနိုင်သော တိုးညှင်းအိမ်ကလေး လိုချင်ရုံသာ။ ထိုအိမ်ကလေးတွေထဲ့ ကဗြောင်းကဆန် ဝင်မွှေ့တတ်သော လောကဓံမုန်တိုင်း တွေရဲ့ ဖြစ်တည်မှု့ကိုတော့ ထိုအချိန်ကမသိတတ်သေးပေ။ ခင်မာဆယ်တန်းရောင်တော့ပညာရေးဘော်ဒါဆောင်တစ်ခုမှာစကော်လာတစ်မျိုးရ၍ရန်ကုန်ပြောင်းရသည်။ ရံဖန်ရံခါပင် နီးစပ်ခွင့်မရဖူးသော အဖေက ခက်မာ၏ စရိတ်စကအထွေထွေ တာဝန်မျှဝေခံယူပေးမည့်အကြောင်း ကမ်းလှမ်းလာ၍ အဖေ့ မှုန့်ဖိုးအားကိုး ၍ ဆေးကျောင်းတက်ရဖို့ ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် ခက်မာအဖေမက မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြေခံ ရုန်းကန်လူတန်းစား တော်တော်များများလို အရက် နှင့် ထွက်ပေါက် ရှာရင်း အရင်၏ လွှမ်းမိုးမှု့အောက်တွင် သူ့ဘဝခရီးကြမ်းကို ထိုင်ညည်းစမ်းပြရုံမက အဓမ္မထိုင်နားထောင်ပေးရသည့် ခက်မာကိုပါ ရမယ်ရှာပြီး ရိုက်လားနှက်လား လုပ်တတ်သူဖြစ်သည်။ ခက်မာကလည်းခက်မာဆိုတော့ နာမည်အတိုင်း ပိုခေါင်းမာတတ်သူ မတရားမှု့ကို စက်ဆုပ်သူပီပီ ကိုယ်မှန်သည်ထင်လျှင် နောက်မဆုတ်တတ် အဖေကလည်းပန်းကန်နဲ့ခေါင်းရိုက်ခွဲလျှင် မီးဖိုချောင်ထဲ့ပြေး ဓားပါလက်ထဲထိုးထည့်ပေး၍ တစ်ခါတည်းအသေထိုးခိုင်းသူမျိုးဖြစ်လာသည်။ သူမွေးထားပေးလို့ လူဖြစ်လာရခြင်း ကျွေးထားပေးလို့ပညာတတ်ဖြစ်လာရခြင်း အစရှိသဖြင့် မိဘကျေးဇူးမြင့်မိုရ်ဦးအတွက် သူပေးသမျှ ဒုက္ခကိုလည်း လည်စင်းပေးခံရဖို့မှာ မွေးရာပါတာဝန်ဝတ်တရားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ချောင်ပိတ်ရိုက်ခံရသောအခါ ခက်မာ၏အိမ်မှာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များစွာနှင့် နာကျည်းမှု့များ စုဝေးရာသာ ဖြစ်လာတော့သည်။အချိန်မရွေးထပေါက်နိုင်သောချိန်ကိုက်ှဗုံးတစ်လုံးလိုအရက်ကိုအလွန်အကျွံသောက်စား နှိပ်စက်တတ်သော အဖေ့အိမ်တွင် မျက်ရည်မျက်ခွက်နှင့် မအိမ်ရသောညလည်းမရှိခဲ့။ တစ်နေ့တစ်နေ့ကျောင်းစာလည်းအာရုံမစိုက်နိုင်ဘဲ တစ်နေ့ပညာစုံလျှင် အိမ်ကထက်ပြေးဖို့သာ ကြံရွယ်နေသည့် ခက်မာမှာ အဖေ့နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့သည့် အချိုးတကွေ့တွင် အရိုးတွင်တွင်ကျိုးပြီး ဆေးရုံ တက်ရ ခွဲစိတ်ရတော့မှ မွန်းကြပ်ပိတ်လှောင်သည့် ကျိန်စာသင့်စိတ်နှင့် ကျောင်းမပြီးသေးခင်ကပင် ခက်မာ အိမ်ပေါ်ကဆင်းခဲ့ဖြစ်သည်။ တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းစွာစာကြိုးစားတတ်သောခက်မာသည်ဘဝတစ်ချိုးကအိမ်နောက်တစ်လုံးမှပေးသော စိတ်ဒဏ်ရာများကြောင့် လောကကြီးကို အရွ့ဲတိုက် စိတ်များသာ ရင့်ထော်ခက်ထန်ခဲ့သည်။ ဂစ်တာကိုကျောပိုးမှာလွယ် ဝိုင်ပုလင်း သုံးလေးလုံးကို လက်ကိုင်အိတ်ထဲဝယ်ထည့်ရင်း ခက်မာ မြို့ပတ်ရထားကို ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်စီးသည်။ ဆေးကျောင်းကို ကျောခိုင်းပြီး ကိုယ့်လိုလမ်းဘေးသရဲဖြစ်နေသော လူငယ်များနဲ့ မိ်တ်ဖွဲ့ကာ ပစ်စလတ်ခတ် သောက်စားမူးညစ် ပျက်စီးတော့သည်။ အချိုးတကွေ့တွင် မူးပြဲနေအောင်ဆေးထည့်ခတ်၍ ခက်မာအပျိုစင်ပန်းကလေးပါ စုတ်ပြတ်နေသည့် ယာတဲအိမ်ကလေးတစ်ခုမှာ ချိုးဖဲ့ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရသည့်အချိန်မှ ခက်မာအိမ်မကဆိုးမှပြန်နိုးထချင်စိတ်အညှောင့်ကလေး စပေါ်တော့သည်။ ထိုယာတဲအိမ်ကလေးကတော့ ခက်မာ ဘဝမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စက်ဆုပ်ရွံရှာဆုံး အိမ်ကလေးတစ်လုံးသာအမြဲဖြစ်နေမှာ သေချာပါသည်။ထိုအချိန်ကဘဝကို အဆုံးထိ ဆွဲသတ်လိုက်ချင်စိတ်မပေါ်ဘဲ မခံချင်စိတ် နှင့် ပြန်ရုန်းထချင်စိတ်သာ တဖွားဖွားအားကောင်းခဲ့သည်ကိုလည်း ခက်မာ အံသြရသည်။ သို့သော်ခက်မာလောကကြီးကိုအနိုင်နဲ့သာအပိုင်ပိုင်းချင်သောရည်မှန်းချက်အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ပြန်စီးဆင်းချင်သည့် စမ်းချောင်းကလေး ပြန်ဖြစ်လာပါသည်။ ခက်မာဆရာဝန်ကတော့ ရေစီးကြောင်းထဲမှာ အတိတ်ကအမှိုတ်သရိုက်တွေ ပိတ်ဆို့နေသည့် ချောင်းလက်တက်များရှိသည်ဟု ထောက်ပြသော်လည်း ခက်မာမှာ နှုတ်ခမ်းကို တင်းအောင်စေ့၍သာ လူမှု့ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်အားပေးတွေ အားတက်သရော ဦးဆောင်လုပ်ပါတော့သည်။ခက်မာလုပ်အားပေးခဲ့သည်ကုသုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းများရွေ့လျားဆေးခန်းများသည်ခက်မာ၏အိမ်အသစ်ဖြစ်လာပြီးကျန်းမာရေးအသိဉာဏ်နုံနဲ၍ဒုက္ခကပိုများကုန်သောမရှိဆင်းရဲသားလူနာများသည် ခက်မာ၏မိသားစုဝင်အသစ်များဖြစ်လာသည်။ ခက်မာက လူနာအတွက်ခက်ခဲ့မာကျောနေသော ဘဝတွေကို ဖြေလျှော့နားခိုစရာ တဒဂ်အိုအေစစ်လေး ဖြစ်ချင်သည်။ တစ်ဖက်မှာလည်းလူနားများ၏ ကျေးဇူးတင် မျက်ဝန်းများမှာ ခက်မာ၏ခယောင်းလမ်းက အတိတ်ခြေရာများမှ တဒဂ် ပုန်းခိုမေ့ပျောက်ရာ ပင်လယ်ပြာကလေးဖြစ်လာနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်မိသည်။သို့နဲ့ကျောင်းမပြီးခင်အထိမိသားစုကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးခက်မာထိုပင်လယ်ကမ်းစပ်ကလေးမှာပင်သဲအိမ်ကလေးတွေတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဆောက်နေဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းပြီးတော့ခက်မာ မွေးရပ်ဇာတိမှာ အဘိုးဆုံးပါးသွားလို့ တစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့တဲ့ အဖွားကိုအဖော်ပြုရင်း အဘိုး၏ဆေးရုံဟောင်းလေးမှာ အလုပ်သင်ဆင်းသည်။ ခက်မာက ဘဝမှာ ကိုယ့်ကို နင်းချေချိုးဖဲ့ခဲ့သူများကို ကြီးကျယ်ခန်းနားသော အဓိပ္ပာယ်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ဘဝဖြင့် ” ဗေဒါပျံအံကိုခဲ ပန်းပန်လျှက်ပဲ “ဟုကြွေးကြော်ပြချင်သည်။ ငယ်ဘအိပ်မက်ထဲက စံပယ်ရုံအိပ်ခန်းလေးမှာ ရိုးရှင်းတိုးဖျော့နေဖို့ စိတ်ကူးကလေးမှာလည်း ကြွေမွခဲ့ပြီ။ ဘွဲ့ရတော့ ခက်မာ ကူညီလုပ်အားပေးခဲ့သော ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းမှ စကော်လာပေး၍ နိုင်ငံခြားမှာ တစ်နှစ် ပညာသင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ အဲ့ဒီနိုင်ငံတွင် အခြေချဖို့ကြိုးစားလိုသော်လည်း ဆက်လက်ရှင်သန်ဖြတ်သန်းမှု့တစ်လျှောက်မှာ ခက်မာကစစ်ဘေးသင့် ဒေသတွေမှာ လူမူ့အကျိုးပြု ကျန်းမားရေးကုသမူ့များလုပ်ပေးသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်လက်တွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ခက်မာအတွကကြီးကျယ်ခန်းနားသော ဘဝတန်ဖိုးမှာကိုယ်နဲ့ဘဝတူဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြုံရသူများကို ကူပေးနိုင်သည့် မိုင်တိုင်များသာဖြစ်သည်။ သို့သော်ခက်မာကျင်လည်ခဲ့သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ခက်မာအပေါ်မတရားသဖြင့် ညင်းဆဲခံခဲရသော အတိတ်ကြောင့် ဝန်ထမ်း အခွင့်အရေးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးခြင်းမရှိတတ်သော အစိုးရ ကျန်းမာရေးလက်အောက်တွင် ပေးဆပ်အနစ်နာခံဖို့စိတ်ကူးလဲအပေါ်ခဲ့။ သို့နှင့်ခက်မာ၏ ဒိုင်ယာရီတွင် အလုပ်ကိုအကြောင်းပြု၍ ရွေ့လျားကျင်လည်ရသော အိမ်ကလေးတွေ ထပ်တိုးလာပါသည်။ သို့သော်လက်တွေ့ဘဝဆိုသည်မှာ ခြုံကြားမှ ဘုံဖျားကို ရုန်းတက်ပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နိဂုံးကလေးများနှင့် ကန့်လန့်ကာချထားသော တခန်းရပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းမဟုတ်သောကြောင့် ခက်မာမှာ ဆက်လက်ရုန်းကန်ရင်ဆိုင်ရသော လောကဓံအထုအထောင်းများလည်း ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရဆဲပင်။ ထိုအထဲမှာမှ အနာဂတ်အိမ်လေးမှာ ကိုယ်ပိုင်မိသားစုဘဝတည်ဆောက်ဖို့ တွန့်ဆုတ်စိတ် မယုံမရဲစိတ်ကတော့ အဆိုးဆုံးပင်ဖြစ်သည်။ ခက်မာ၏အိမ်အမျိုးမျိုးက လူအထွေထွေမှာလည်းအများစုက ဖြတ်လျှောက်များသာဖြစ်ပြီး အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု့ကြောင့် စိတ်မလုံခြုံတတ်သောခက်မာကလည်း အပြင်လူကို အတွင်းစည်းထဲ ပေးခြေချမိသည်နှင့် ရေဆုံးရေခန်းသာ တွယ်သာ၍မှီခို၍အားကိုးမိတတ်သည်။ ထိုသို့ ကိုယ်ကဘဝတစ်ခုလုံးစာ ပုံအပ်ခဲ့သော်လည်း ပုံဆိုးပန်းဆိုးနှင့်သာ အဆုံးသတ်ခဲ့ရသည့် ပုံပြင်တစ်ချို့ကြောင့် အနာဂတ်တွင် မှေးမှိန်နားခိုစရာ အိမ်ကလေးတစ်လုံးဟု တိတိပပ စိတ်ကူးဖို့ရာ တွန့်ဆုတ်လှသော်လည်း နေသားတကျပင် အထူတလည် လေးပန်ဝမ်းနည်းခြင်းမရှိတော့ချေ။ အလိုဆန္ဒများဖြင့် ယှက်ရက်လွန်းဖွဲ့ထားသော လောကပန်းခြံကလေးမှာ တတိုင်းမွှေးနိုင်သော ပန်းပင်ကလေးတွေ များများစားစားမရှိနိုင်သည့် လောကဓံသဘောကို နောကျေပြီး၍လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ခက်မာအတွက်တော့ ရုန်းကန်နေ့တနေ့၏ နေဝင်ချိန်အိမ်ကလေးမှာ ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်လေးစားတန်ဖိုးထားသောတွေ့ကြုံဆုံကွဲဘဝခရီးသွားဖော်များနှင့်အတူနေရဖို့သာမျှော်လင့်ပါသည်။ တဖန်သူတို့အတွက်လည်း ကိုယ်က ပြန်လာချင်စရာ ချစ်စရာ အိမ်ကလေးသာ ဖြစ်ချင်ပါတော့သည်။
Written by NanolabsFebruary 21, 2022
Featured Selection – Phone Myat Kaythari
ကျမ နဲ့ ကျမ အိမ် လူသားတိုင်းဟာ မွေးကင်းစအရွယ်မှ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်သည်အထိ “အိမ်” ဆိုသည်နေရာမှာ မိသားစုရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကို ခံယူကြရတယ်။ထိုကာလမှာ အစာရေစာလုံလောက်မှု၊ပညာသင်ယူနိုင်မှု အစရှိသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု့ အပြင် မိဘတွေ ဆီကနေ(unconditional love) လို့ခေါ်တဲ့ ၅၂၈ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးကိုလည်းရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကယ်၍လူတစ်ယောက်ဟာသူူ့ရဲ့ငယ်ဘဝမှာလုံလောက်တဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစောက်ရှောက်မှုမရရှိခဲ့ဘူး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လျစ်လျျူရှုခံရတယ်၊မိသားစုဝင်များ၏ အကြမ်းဖက်ခြင်းခံရတယ်ဆိုရင် ထိုလူဟာ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု့ရှိမရှိခြင်း၊အဆိုးမြင်ဝါဒရှိခြင်း အစရှိသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင့်းမှု့များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ မိသားစုမှာကြီးပြင်းလာရပါက အကြမ်းဖက်သူ(အဖေသို့မဟုတ်အမေ) ရဲ့အပြု အမူ(Character) များ ကူးစက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာကျွန်မကအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သတ်ပြီးအနည်းငယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။အိမ်ထောင်တစ်ခုတွင်ပါတနာ(ယောက်ျား သို့မဟုတ် မိန်းမ) ကိုဖြစ်စေ၊ ကွာရှင်းပြတ်စဲထားသော လက်တွဲဖော်ဟောင်းမှဖြစ်စေ၊ ဆွေမျိုးများမှဖြစ်စေ ကာယကံရှင်၏ စိတ်ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်၍ တစ်စုံတစ်ခုကိုစေခိုင်းခြင်း၊ ထိခိုက်နာကျင်အောင်ပြု လုပ်ခြင်းဟာ အိမ်တ င်းအကြမ်းဖက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာမှု့အသိုင်းဝိုင်းမှာ အိမ်ထောင်ပျက်တယ်ဆိုတာကို အပြစ်တစ်ခုလို့ မြင်တာကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေရင်တောင် သားသမီးတွေ စိတ်အားငယ်မှာဆိုးလို့ ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကကဲ့ရဲ့မှာကြောက်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဆက်လက်ပေါင်းသင်းတတ်ကကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး(၅)ယောက်မှာ(၁)ယောက်ဟာ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုခံစားနေရတယ် ။ဇနီးမယာားအား မိမိစိတ်အလိုမကျတိုင်းရိုက်နှက်ခြင်း၊ဖောက်ပြန်သည်ဟုစွပ်စွဲကာ မနာလိုစိတ်ကို ဗန်းပြ၍ရိုက်နှက်ခြင်း၊အရက်မူးလာ၍လက်ပါခြင်းတို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်သည်။သို့သော် မြန်မာအမျိးသမီး အိမ်မထာင်ရှင်တို့သည် “အိမ်ထောင်ကျပြီးရင်တော့ …ယောကျ်ားရိုက်တာခံရမှာပဲ ” ဟူသည့် မည်သူတီထွင်ထားမှန်းမသိသော ဆိုရိုးကို စိတ်မှာ စွဲမှတ်ကာ မိမိအားအကြမ်းဖက်လို့ ဖက်မှန်းမသိခေါင်းငုံ့ခံကြသည်မှာအလွန်သနားစရာကောင်းလှပါသည်။တချို့အိမ်ထောင်ရှင်အမျိးသားများကြတောွလည်းမိမိဇနီးသည်ကိုအလိုမတူသည့်နည်းလမ်းနှင့်အတင်းအဓမ္မကာမဆက်ယှက်ကြသည်။အိမ်ထောင်ကြပြီးပါက မိန်းမများကို sex object ကဲ့ သို့သဘောထား၍ မလေးမစားပြု မူတတ်ကြသည်။အမှန်မှာ လင်မယားဖြစ်စေ၊သမီးရည်းစားဖြစ်စေအလိုမတူလိင်ဆက်ဆံပါကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု့မြောက်သည်။အထက်ဖော်ပြပါအိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုမှာ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်ရပ်များပါဝင်တာကြောင့် အကြမ်းနည်းသည်။အနုနည်းမှာ“စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ၊စီးပွားရေးအရ”အကြမ်းဖက်မှု့ဖြစ်သည်။ထိုအနုနည်းဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုမျိုးကို အမျိုးသားများက အများအားဖြင့် ကြုံတွေ့ကြရသည်။” သူများယောက်ျားတွေများပိုက်ဆံရှာနိုင်လိုက်တာ…ရှင်ကြတော့အဖြစ်ကိုမရှိဘူး”စသဖြင့်ထူးခြားချက်မှာဓလေ့ ထုံစံများပေါများခြင်းဖြစ်သည်။မိမိတို့နိုင်ငံရှိဓလေ ထုံးစံများကိုသာမက “မိန်းမဆိုတာ အယုတ်မျိုး” ဆိုသည့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမှ အယူအဆကိုလည်း ကော်ပီ (Copy) ပွားမှတ်ယူကြသေးသည်။ထိုအယူအဆက ဘယ်သူကစ၍မိန့်ဆိုလိုက်လည်းမသိ၊သေချာတာကတော့မိန်းမများကိုအလွန်မုန်းနေသူပင်ဖြစ်သည်။ကျွန်မကတောယောက်ျားများကမိန်းမများကိုနိုင်စားရန်အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာဖန်တီးထားတယ်လို့ပဲထင်မြင်မိသည်။အမျိုးသမီးများသည် “အမျိုးးယုတ်” များမဟုတ်ချေ၊ အမျိုးသားကောင်းများကို မွေးထုတ်ပေးသည့်ကရုဏာရှင်များဖြစ်သည်။အမျိုးသမီးများမရှိပဲ နှင့်ထိုယုတ်ညံသည ်အယူအဆများကို ဖန်တီးခဲ့သည့်လူမျိုးစုလည်းမမွေးဖွားလာနိုင်ချေ။ထို့ကြောင့် မိသားစုအတွင်းတွင် ထိုကဲ့သို့ အဓိပ္ပာယ်မရှိသည့် အယူအဆ၊ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့် အကြမ်းဖက်လာပါက လုံးဝလက်မခံသင့်ပေ။ အမျိုးသမီးတွေဟာ အိမ်ထောင်မပြု မီကတည်းက မိမိကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေကိုဖန်တီးနိုင်အောင် အတတ်ပညာတစ်ခုခုကိုသင်ယူထားသင့်သည်။ထို့ပြင် လက်မထပ်ပီကတည်းက မိမိအိမ်ထောင်ဖက်နှင့် မိမိသည် ဘဝနဲ့ ပတ်သတ်သည့်ခံယူချက်ခြင်း၊ တန်ဖိုးထားတတ်ခြင်းတူညီလားဆိုတာကို ကြိုတင်လေ့ လာထားသင့်ပေသည်။အကယ်၍ အရွေးမှားသွားခဲ့လျှင်လည်း မိုက်ကန်းကန်းနှင့် ဆက်မလျှောက်ပါနဲ့၊အိမ်ထောင်ရေးပြတ်စဲသင့်လျှင်ပြတ်စဲရပါမည်။ထိုကဲ့သို့ အချိန်မရွေးကွာစဲပြတ်စဲ နိုင်ရန်အတွက် ယောကျ်ားဝင်ငွေပေါ်ကိုချည်းမှီခိုနေလို့မဖြစ်ချေ။ဒါကြောင်အမျိုးသမီးတွေအနေဖြင့်အိမ်တွင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာမည်သူူ့အကူညီမှမလိုဘဲကိုယ်ဟာကိုယ်ရပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သုသေတနစစ်တမ်းများအရ ငယ်စဉ်အခါကအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု့များကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ကလေးအများစုသည်အရွယ်ရောက်လာသောအခါ အကြမ်းဖက်သမားများဖြစ်လာတတ်ကြသည်။သို့ဖြစ်၍ မိခင်များအနေဖြင့်မိမိတို့၏သားသမီးများတွင်အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးမဖြစ်ရလေအောင်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများကိုလုံးဝလုံးဝခေါင်းငုံ့မခံသင့်ပေ။ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်ထိုကဲ့သို့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများကိုလုံးဝလက်မခံချေ။ကျွန်မ၏ငယ်ရွယ်စဉ်ကကြီးပြင်းခဲ့ရသော”အိမ်”တွင်တော့အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု့များမကြုံတွေ့ခဲ့ချေ။သို့သော်အနာဂတ်တွင်ကျွန်မ၏လက်တွဲဖော်နှင့်အတူဖန်တီးရမည့်”အိမ်”တွင်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု့များကင်းရှင်းအောင်တော့ဆက်လက်ကြိုးစားသွားရပေအုံးမည်။
Featured Selection – Thiri Htet Zaw
ကျမ နှင့် ကျမ အိမ် (၁) နွေခေါင်ခေါင် ပစ်ချလိုက်တဲ့ မိုးကြိုးတစ်ခုလိုပဲ… ပူလောင်ခြင်း နဲ့ ကြောက်လန့်ခြင်းကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မိသားစုဆိုတဲ့ အသိုက်အမြုံလေးရှိတဲ့ အိမ်လေးထဲမှာပေါ့။ မိသားစုရဲ့နွေးထွေးမှု များလို့လားမသိ… ကျွန်မအတွက် အိမ်အရိပ်က မီးလိုပူနေခဲ့တယ်။ (၂) ချစ်သောနှောင်ကြိုးချည်တာ အရမ်းများတင်းထင်ပါရဲ့ ကျွန်မရဲ့အိမ်မက်တောင်ပံအချို့ထပျံဖို့ပွန်းပဲ့ ကုန်ပြီ။ ဘုရားသခင်နားကြားများလွဲသလားရှင့်… ကျွန်မဆုတောင်းခဲ့တာ ဂရုစိုက်မှုလေ ချုပ်ခြယ်မှုများကြားမိလား။ ပွန်းရုံပဲ နာကျင်တာပဲ ဆိုပေမယ့် ခံစားမှုက အရက်ပြန်လောင်းထားသလိုစပ်ဖြင်းဖြင်းနဲ့…။ (၃) လွတ်လပ်ခြင်းကို သင်ကြားမပေးတော့ လွတ်ပြီးလပ်လာတဲ့ မိသားစုဆက်ဆံရေးတွေ… ဆန္ဒတစ်ခုစီအယူခံဝင်တိုင်း လူကြီးဗီဒိုအာဏာနဲ့ပယ်ချ ကြိမ်ဖန်များလာတော့ အရာရာတိုင်းကိုနှုတ်ဆိတ်လာတတ်ပြီ။ (၄) ရွေးချယ်ခွင့်မရှိခဲ့တဲ့ပုံစံခွက်လေး အသစ်ပြောင်းဖို့ အကြောင်းဖန်ခဲ့ပါပြီ။ အိမ်အဟောင်းကြီးက ကင်မွန်းတပ်ပေးလိုက်တယ် သမီးအိမ်ရှင်မဖြစ်ပြီတဲ့ နာမနဲ့ လက်တွေ့တပ်တပ်ဆင်အောင်ပဲလွဲနေသလား။ အိမ်ရှင်မဆိုတာ အိမ်မှာ အရှင်လတ်လတ်ပိတ်မိနေတဲ့ မိန်းမ။ (၅) အိမ်ဦးနတ်ဆိုတာ အားကိုးဖို့ထက် အရိုက်မခံရအောင် အရက် နဲ့အမြည်းနဲ့ပူဇော်ပသရတဲ့ နတ်တစ်မျိုးတဲ့ အရိုးကွဲအောင် ရိုက်မှအသည်းစွဲအောင်ချစ်သတဲ့ သွေးထွက်အောင်မှန်တဲ့စကားရင်ထဲကိုမှန်တာ အရမ်းနာတာပဲ ချစ်စကားနောက်ကွယ်မှာ ပုန်းနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုက တိတ်တိတ်လေးခိုးရယ်နေတယ် ဘဝကိုလက်လျော့ဖို့အားထုတ်တော့ သားရယ်သမီးရယ် နှောင်ကြိုးတွေနဲ့ ဒီလင်ကိုပစ်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်က မျက်လုံးတွေပါးစပ်တွေနဲ့ အရှင်လတ်လတ်ငရဲကျနေသည် သို့မဟုတ် ကျမ နှင့် ကျမ အိမ်။ (၆) အသက်ရှင်သမျှ နိုင်ခွင့်သာသေးသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထက်ကြောက်ရသော သားသမီးတို့အနာဂတ် မိခင်စိတ်က မွေးဖွားသောသတ္တိကို အရင်းအနှီးပြု ငရဲနဲ့တူသော အိမ်ကို ကျွန်မဖြိုချလိုက်သည်။ ဘာလောင်းရိပ်မှ မရှိသော ကျွန်မရဲ့ အိမ်သစ်ကလေး သားနဲ့ သမီးတို့ရဲ့ သံယောဇဉ်ဖြင့် တမျှင်ချင်းရစ်ပတ် အမေတစ်ယောက်ရဲ့မာန် မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက် စိတ်သစ်လူသစ်ကိုမွေးဖွားပေးလိုက်သော ကျမနှင့်ကျမအိမ်။ ။
Featured Selection – Aye Mya Thu
ကျွန်မ နဲ့ ကျွန်မအိမ် “ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကို ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေချင်လဲ”လို့ တစ်ယောက်ကကျွန်မကို မေးလာခဲ့ ရင် ကျွန်မမှာ နှစ်ခါပြန်စဉ်စားစရာမလိုအောင် တိကျတဲ့ အဖြေတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့” ကျမအိမ်လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်”ဆိုတာပါပဲ။ ဒီလိုဆိုရင် ကျမအတွက် အိမ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးအရာမို့လို့လဲလို့မေးစရာရှိပါလိမ့်မယ်။ အိမ်မအတွက် အိမ်ဆိုတာကတော့ ကျမချစ်ရတဲ့သူတွေအားလုံးပါ။ အဲ့ဒီကျမအိမ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သူတွေက များသောအားဖြင့်တော့ ကျမနဲ့ တစ်မိုးအောက်နေထိုင်ကြတဲ့ မိသားစုဝင်တွေပါ။ တစ်ချို့ကတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တစ်မိုးအောက်ထဲ့ မှာ အတူမရှိနိုင်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေပါ။ အဲ့ဒီကျမအိမ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သူတွေဟာ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာဘဲ ရှိနေနေ ကျမရဲ့ ပုံစံကို အရှိအတိုင်းလက်ခံပေးတတ်ကြြ့ပီး သူတို့ဟာ ကျမရဲ့ ဖြစ်တည်မှု့ကိုဘယ်တော့အခါမှ နောင်တမရစေတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျမဟာငယ်စဉ်ကတည်းက သာတူညီမျှမှု့ဆိုတာကို အိမ်မှာပဲ သင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမငယ်စဉ်ကတည်းကအခု အသက်နှစ်ဆယ်ရွယ်အထိ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နောက်ကျမှ အိမ်ယာနိုးတဲ့ နံနက်ခင်းတိုင်းမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ နောက်ကျတဲ့အထိ မအိပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုကို ဘယ်တုန်းကမှ ကြားရလေ့မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါတင်မကသေးဘဲ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျမဖေဖေဟာ ဆေးခန်းပိတ်တဲ့ နေ့လည်ခင်းမှာ မေ့မေ့ကိုမီးပူကူတိုက်ပေးတာတို့ အဝတ်လှန်းပေးတာတို့ တံမြတ်စည်းလှည်းပေးတာတို့ ကူလုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကျမတို့နဲ့ အတူတူနေတဲ့ မေမေရဲ့ အစ်ကိုကျမဦးလေးကတော့ နံနက်တိုင်းဈေးသွားပေးလေ့ရှိသလို တစ်ခါတစ်ရံ မီးဖိုချောင်မှာ သူကိုယ်တိုင်လက်စွမ်းပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမဟာ အိမ်မှုကိစ္စကို မိန်းမတွေဘဲလုပ်သင့် ကြောင်းပြောလာကြသူတွေကို ပြန်လည်ချေပဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျမပြောခဲ့ဖူးတဲ့အတိုင်းဘဲ ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမဖြစ်တည်မှု့ကို ဘယ်တုန်းကမှ နောင်တမရစေခဲ့ပါဘူး။ ကျမအသက်တစ်ဆယ့်တစ်နှစ်အရွယ် ပထမဆုံး ဓမ္မတာလာတဲ့ အချိန်မှာ ဒါဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်သလို စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာစရာ ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ဲတဲ့သူတွေက ကျမဖေဖေ၊ ကျမမေမေ၊ ကျမအဖွား ပါ။ ဒါ့အပြင် ကျမအခုအချိန်ထိ လစဉ်ဓမ္မတာလာတိုင်း နာကျင်ကိုက်ခဲမှု့တွေဖြစ်လာတဲ့အခါ ဖေဖေ့ ဆီကဘယ်လိုဆေးတွေသောက်သင့်လဲဆိုတာအကြံတောင်းနေကျပါ။ ဒါကြောင့်ဘဲ ကျမဟာ မိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ်မွေးဖွားလာရခြင်း ဘယ်တုန်းကမှ ဝမ်းနည်းစိတ်ပျက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ကျမတို့အိမ်ဟာ လူသားတွေကို လူသားတွေလို့ဘဲ မြင်တဲ့ သူတွေစုစည်းတည်ရှိရာနေရာတစ်ခုပါ။ ကျမအကြိုက်ဆုံး ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “It’s okay to not be okay ”ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက စကားလေးတစ်ခုကို ကျမအမြဲအမှတ်ရနေမိပါတယ်။ “လူတွေကအားနည်းတတ်ကြတယ်… ဒါကြောင့်ဘဲ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မှီခိုပြီးနေကြရတာ”တဲ့။ ကျမတို့အိမ်မှာလဲ ဒီလိုပါဘဲ။ ကျမတို့အားလုံးဟာ လူသားတွေမို့ အားနည်းချက်ကိုယ်စီနဲ့ပါ။ ဒါကြောင့် ကျမတို့အားလုံးဟာ အချင်းချင်း မှီခိုနေထိုင်ကြပြီး ကူညီဖေးမကြပါတယ်။ ဥပမာ ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ ကျမဦးလေးငယ်က သူ့အစ်ကိုဖြစ်တဲ့ ကျမဦးကြီးနဲ့ စကားများပြီး ကတောက်တဆဖြစ်တိုင်း ငိုတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူကမှ ယောကျာ်းလေးဖြစ်ပြီး မျက်ရည်ကျရကောင်းမလားလို့ မဝေဖန်ကြပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ယောကျာ်းမိန်းမမရွေး လူသားတွေအားလုံးဟာ အားနည်းတတ်ကြတာကို ကျမတို့လက်ခံထားကြလို့ပါ။ ဒါကြောင့်ဘဲကျမရဲ့ အိမ်ဟာ ကျမရဲ့ အားသာချက်တွေ အားနည်းချက်တွေ အကုန်လုံးကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောနေရာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ကျမအတွက် ဘယ်လိုခက်ခဲ ပင်ပန်းမှု့တွေဘဲရှိနေပါစေ ကျမရဲ့အိမ် တစ်နည်းအားဖြင့် ကျမအိမ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေဟာ အမြဲလိုလို ကျမကိုပျော်ရွှင်စေပြီးသက်သောင့်သက်သာ ခံစားရစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မဟာကမ္ဘာကြီးမှာ နေထိုင်ရှင်သန်လာရင်းနဲ့ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလှအောင်လူသားတွေကို လူသားတွေလို့ မမြင်နိုင်တဲ့လူတွေကို တွေ့ရတဲ့ အခါမျိုးမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ယောကျာ်းတွေနဲ့ မိန်းမတွေမှာ မမွေးဖွားလာခင်ကတည်းက သီးသန့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ တာဝန်တွေနဲ့ လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေရှိသလိုမျိုး ပြုမှုတွေးခေါ်နေတဲ့သူတွေကို တွေ့ရတဲ့အခါမျိုးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားမိပါတယ်။ “ဒီကမ္ဘာကြီးသာ ကျမတို့အိမ်လိုနေရာမျိုးဆို ဘယ်လောက်ကကောင်းလိုက်မလဲ “လို့ပါ။ Aye Mya
Featured Selection – Htet Htet Naing Htun @ Ah Htun
ကျွန်မ နဲ့ ကျွန်မအိမ် ကျွန်မအလုပ်ကပြန်ရောက်တော့ အိမ်မှာအဖေမရှိနေဘူး။ အမေကတော့ အိပ်ရာမှာခွေခွေလေး။ အရင်ကဆိုကျွန်မတို့အိမ်လေးမှာ အမေ့လက် အမေ့ခြေချည်းပဲ။ အိမ်အလုပ်တွေ ဇယ်ဆက်ဆိုသလို လုပ်နေတတ်တဲ့ အမေဟာ အခုတော့အိမ်ရာထဲ့မှာ လှဲနေရတာ နှစ်လတောင်ကျော်ရှာပြီ။ ကျွန်မပြန်လာမှန်းသိတော့အမေဟာအိပ်ယာကထထိုင်လိုက်သည်။ကျွန်မလည်းအမေ့နားဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ အမေ့ကို ပြောစရာစကားမရှိ၊ လည်ချောင်းတွေ ခြောက်ကပ်ပြီး မျက်ရည်တွေသာ ဝိုင်းလာသည်။ အမေလည်းထို့အတူပင်ထင်သည် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျှက်။ ညနေစာချက်ပြုတ်ပြီး ဝိုင်းဖို့ပြင်တော့ အမေက မေးလာသည်။ အလုပ်နဲ့နီးတဲ့ အဆောင်မှာ ညည်းပြောင်းနေချင်လားတဲ့။မျက်ရည်တွေထိန်းမရအောင်ကျလာပေမယ့်ခေါင်းငုံပြီးထမင်းဆက်စားနေခဲ့သည်။ ထမင်းဝိုင်းလေးလည်း တိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်။ ကျွန်မသိတတ်တဲ့အရွယ်ကတည်းက အိမ်မှာ တစ်ခါမှ တိတ်ဆိတ်တယ်လို့ မရှိခဲ့ဘူး။ အဖေက မူးပြီးအမေ့ကို ဆဲဆိုနေတာမျိုး၊ အဖေနဲ့ အမေ ရန်ဖြစ်နေတာမျိုးကများသည်။ အခုတော့အိမ်လေးက တိတ်ဆိတ်လိုက်နေပုံများ ကြောက်စရာပင် ကောင်းလှသည်။ ခွေးအူသံများ ကြားရပြီးနောက် တံခါးဖွင့်သံကြားလိုက်ရသည်။ ထို့နောက် “သူသူ…..သူသူ” အဖေ ကျွန်မကိုအော်ခေါ်နေတော့သည်။ အိပ်ရာကလူးလိမ့်ထပြီး နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၁၁နာရီခွဲ။ ထိုအခိုက် အမေ့အိပ်ရာဘက်မှ “အီ” ခနဲ ရှိုက်ငိုသံထွက်ပေါ်လာသည်။ မနက် ၆ နာရီ ကျွန်မ အိမ်ယာထတော့ အဖေအိမ်မှာ မရှိတော့ဘူး။အမေ့ကိုချက်ပြုတ်ပေးရ အလုပ်သွားဖို့ ပြင်ဆင်ရနှင့်မို့ ကျွန်မ ဗျာများနေသည်။ ကျွန်မလုပ်နေကိုင်နေပုံကို အိပ်ယာပေါ်ကနေအမေစောင့်ကြည့်နေလေသည်။ထို့နောက် “သူသူ၊ ညည်း နဲ့ ကျုပ်ဒီအိမ်ကနေ ထွက်ပြေးရအောင်” အမေကငိုသံပါနှင့် ပြောချလာသည်။ “ဟုတ်တာပေါ့ ကျွန်မထွက်ပြေးချင်တာပေါ့။ ဒီငရဲခန်းကြီးရဲ့ အဝေးဆုံးကို ထွက်ပြေးလိုက်ချင်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ထွက်ပြေးဖို့ ဘယ်မှာ သွားနေရမှာလဲ။ အောက်ပိုင်းသေနေတဲ့ ဒုက္ခိတမိခင်ကြီးကို ထားခဲ့ပြီး အဆောင်မှာ ဘယ်လိုစိတ်နဲ့ သွားနေမှာလဲ အမေရဲ့ဒီ၁၅နှစ် သမီးရဲ့လစာ နဲ့သားမိနှစ်ယောက် ရပ်တည်ဖို့ ဖြစ်မှ မဖြစ်နိုင်တာ ဘယ်လိုထွက်ပြေးကြမှာလဲ”။ ဒီတစ်ခါတော့ အောင့်အီးသမျှ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုချလိုက်မိသည်။ အမေလည်းကျွန်မနဲ့ အတူလိုက်ငိုရှာသည်။ ကျွန်မဆိုင်ကို ရောက်တော့ ၈နာရီထိုးလုပြီ။ ကျွန်မရောက်တာနဲ့ ဆိုင်ရှင်သူဌေးမက ဆီးမေးတော့သည်။ ညည်းမျက်နှာ ဖူးယောင်လာပြန်ပြီကော ညည်းအဖေ ရိုက်ပြန်ပြီလားတဲ့။ ခေါင်းကိုဆတ်ခနဲ့ ညိတ်ပြပြီး လုပ်စရာရှိတာမျာ အမြန်ဝင်လုပ်နေမိသည်။ မဌေးကတော့ သက်ပြင်းချလျှက်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ညနေစောင်းပြန်ပြီ ကျွန်မ အိမ်ကိုပြန်ရပေဦးမည်။ သူများတွေအဖို့ အိမ်ဆိုတာ နွေးထွေးရာ ခိုလှုံရာလေးဖြစ်မယ်ထင်သည်။ အိမ်ပြန်ရောက်သွားတာနဲ့ တနေ့တာအခက်အခဲတွေအားလုံး ပြီးဆုံးပြီထင်သည်။ကြည့်ပါလား သူတို့ အိမ်လေးဆီ ခြေလှမ်းသွက်သွက်နဲ့ပြန်နေကြတာ။ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းသာ လေးလံသောခြေလှမ်းများဖြင့်။အိမ်ကိုရောက်တော့ ဖိနက်ချွတ်မှာ ဖိနပ်တွေ များနေတာ တွေ့လိုက်ရသည်။ ကျွန်မရင်ထဲ ထိတ်သွားသည်။ အမေ့ကိုစိုးရိမ်စိတ်က ခေါင်းထဲ ဖျက်ကနဲဝင်လာသည်။ ရင်ထဲလည်းတလှပ်လှပ်ဖြစ်လျှက်။ အိမ်ပေါ် အမြန်ပြေးတက်သွားမိတော့ အမေကအိပ်ရာပေါ်ထိုင်လျက်သား။ ဘေးမှာလည်းရပ်ကွက်လူကြီး နဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေရောက်နေကြသည်။ “အမေရယ် ဘာတွေဖြစ်နေတာတုန်း” မေးတော့ အမေ့မျက်နှာ တည်ငြိမ်နေသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအခိုင်အမာ ချထားတဲ့ မျက်နှာမျိုးနှင့်။ ထူးထူခြားခြား ဒီနေ့တော့ အိမ်ပြန်ရောက်တာ လုံခြုံနွေးထွေးမှု့ကို ခံစားလိုက်ရသည်။ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်လျော့သွားပေမယ့် ကျွန်မတို့ရဲ့ အိမ်ကလေးပိုပြီးစိုပြေလာသည်။ အမေ့မျက်နှာမှာလည်း အပြုံးလေးတွေအမြဲလိုလိုပွင့်နေတတ်ပြီ။ ကျန်းမာရေးလည်း ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်မမျက်နှာမှာလည်း ဒဏ်ရာတွေ ထပ်မရတော့တာကြာပြီ။ အခုတော့ အဖေ့ ခြင်ထောင်ထဲ့ မအိပ်ရတော့ဘဲ အမေနဲ့အတူ အိပ်နေရပြီ။ အဖေကတော့ နှစ်အတော်ကြာ ထောင်ထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း အိပ်သွားရပါဦးမည်။ Ah Htun
Featured Selection – Win Lae Nandar
နန်းမော်၏စိတ်ထဲ့တွင် ‘အိမ်‘ ‘အိမ်‘ ဟုအိမ်ပြန်လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ရွက်လာခဲသည်။ ဒီနေ့ကျောင်းတွင် ဆရာမက “မိမိအိမ်အကြောင်း “ စာစီစာကုံးကို အိမ်ကနေရေးဖို့ မှာလိုက်တယ်။ အဲ့အချိန်ကတည်းက နန်းဟာ စိတ်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ မကပ်တော့ပေ။ နန်းအသစ် ၁၆ နှစ်ရှိပီ ဖြစ်သော်လည်းခုထိအိမ်ဆိုတဲ့ အသံကိုကြားတိုင်း ခုလိုတွေးမြဲ ငေးမြဲ။ သြော်… သေချာတွေးမိတော့လည်း နန်းခုလိုဖြစ်တတ်တာဒီတစ်ခုတည်းကြုံရမှတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလေ။ဘာကြောင့်ခုလိုဖြစ်တာလည်းမေးရင်တော့ နန်းမှာ ပြောစရာအများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဂေဟာကို နန်းပြန်ရောက်တော့ လုပ်နေကျ တစ်နေ့တာ အလုပ်တွေဖြစ်သော ရေဖြည့်၊ တံမျက်စည်းလှည်း၊သန့်ရှင်းရေးလုပ်၊ထမင်းစားပြီးဂေဟာကကလေးတွေနဲ့အတူစာလုပ်ချိန်ရောက်လာခဲ့ပြီလေ။ ဒီနေ့အတွက် အိမ်စာမှာ မြန်မာဆရာမရေးခိုင်းလိုက်သော “ မိမိအိမ်ကြောင်း“သာရှိလေသည်။ ကဲ ရေးကို ရေးရမည့်အချိန် ရောက်လာပါပီ။ ဆက်ပြီးရှောင်နေလို့လည်းမရတော့။ ရေးတော့မည်ဆိုပြီး စဉ်းစားရုံစရှိသေးသည် မျက်ရည်များဝဲလာလေပီ။ နောင့်မျက်နှာကိုလည်း လှမ်းကြည့်မိသည်။ ဒီစာစီ စာကုံးဟာ အတန်းထဲ့တွင်ရှိသော တခြားသူအတွက် လွယ်ကူနိုင်သော်လည်း လူမှန်းသိတတ်စ အရွယ်ကတည်းက ဒီ “ပီတိ“ ဆိုသည့်ဂေဟာမှာသာ ကြီးပြင်းခဲ့သော နန်းတို့လိုကလေးတွေအတွက်တော့အိမ်ဆိုတာဟာစိတ်ကူးယဉ်ယုံမျှသာ။အသက်(၁၁)နှစ်လောက်တုန်းကတော့ နန်းမှာ သိပ်ချစ်စရာကောင်တဲ့ အိမ်လေးရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူများတွေလို နန်းမှာလဲပေါ့ (အဖေ)ရယ်၊ မှဲ့ ( အမေ) ရယ်၊ နောက်ပြီး (ညီမလေး)ရယ် အတူတူနေသော နွေးထွေးအေးချမ်းတဲ့ “အိမ်ကလေး” ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ နန်းတို့ရဲ့ ရွာကအိမ်လေးဟာ ၂၀၁၅ မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့သော လောက်ကိုင်က တိုက်ပွဲတွေ့ကြောင့် ပျောက်သွားခဲ့တာ ၅ နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပြီ။ ၂၀၁၅ ရဲ့လောက်ကိုင်တိုက်ပွဲဟာ နန်းတို့တွေချစ်တဲ့ အိမ်လေးနဲ့အတူ နန်းရဲ့ချစ်ရတဲ့ မိဘနှစ်ပါးလုံး ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ပြန်မစဉ်းစားချင်လောက်အောင် ခါးသီးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေပါပဲ။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေမတိုင်ခင် နန်းရဲ့ အိမ်လေးဟာ အပြင်ကမောခဲ့သမျှ အပန်းပြေစေတဲ့ နေရာ၊ မနက်စောစောထပြီး မိဘတို့ တောင်ယာမသွားခင် ထမင်းလက်ဆုံစားနေကြနေရာ၊ ကျောင်းသွားဖို့ဝတ်စုံလေးတွေ ထုတ်ပေးတဲ့ နေရာ၊ကျောင်းမှာထမင်းစားဖို့ထမင်းချိုင့်လေးပြင်ပေးတဲ့နေရာ၊ ပေါ့ မှုန့်ဖိုးပေးပြီးစာကြိုစားဖို့ပြောတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်။ ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ.. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ စိတ်တိုင်းကျ ကစားခဲ့ရတဲ့အမှတ်တရများ၊ ညဘက်အိမ်မရတိုင်း ပုံပြင်တွေပြောပြတတ်သည့် ပေါ့ နှင့် မှဲ့ ရဲ့ ပုံရိပ်များ ၊ နောင့်လေးနဲ့ ဖက်အိပ်ရင်း မနက်မိုးသည်းပါစေ ကျောင်းမသွားချင်လို့ပါလို့ ဆုတောင်းရင်း အိပ်ခဲ့သည့်ညများ၊ အိမ်စာမလုပ်လို့ဆရာမရိုက်ခံရလို့ ငိုပြီးအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါ နွေးထွေးစွာ ဖက်ထားပြီး “နန်း စာလုပ်ပါ မှဲ့တို့လို မပင်ပန်းစေချင်လို့ ကျောင်းထားတာ စာလုပ်ပါ”ဆိုတဲ့အသံလေးများဟာ နန်းရဲ့ရှုံးဆုံးသွားတဲ့ အိမ်လေးမှာပဲရှိတာ။ နန်းရဲ့ အိမ်ဟာ တစ်ချိန်က ပျော်ရွှင်နွေးထွေးတဲ့ မိသားစု၊ ရိုးသားပွင့်လင်းသည့် အိမ်နီးချင်းများ၊ ချစ်စရာကောင်းပြီး အနစ်နာခံတတ်သော သူငယ်ချင်းများ တွေနဲ့ လှပအေးချမ်းသော တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာ “သံယောဇဉ်ကြိုးများဖြင့် ရစ်ပတ်ထားသော အသိုက်အမြုံ ““နွေးထွေးသော အသိုက်အမြုံ” ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ သေချာပါသည်။ အဲ့လောက်ပျော်ဖို့ ကောင်းတဲ့နေရာမှာ နန်းနဲ့ နန်း သူငယ်ချင်းများ ပြီးတော့ တခြားသူများစွာသော အိမ်များမှာ မေလ (၁၅)ရက်နေ့က လောက်ကိုင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့သော စစ်ပွဲကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ နန်းတို့အိမ်လေးသာမက နန်းချစ်သောရွာမှာ ရှိတဲ့ အိမ်တိုင်းနီးပါးကို ရှုံးဆုံးရပြီး မိသားစုများစွာ သေကွဲ၊ ရှင်ကွဲကွဲခဲ့ရသည်။နန်းတို့ရွာကအိမ်လေးမျာပျော်စရာအတိတ်တွေရှိသလိုဝမ်းနည်းစရာအရိပ်တွေလည်းရှိတယ်။မိဘနှစ်ယောက်လုံးခေါင်းချခဲ့တဲ့နေရာဟာနန်းတို့လွမ်းတိုင်းပြန်သွားလို့မရပေ။ခုထိအဲ့ဒေသကမတည်ငြိမ်သေးသလို နန်းမှာလဲ အဲ့ဒီကို သွားဖို့ ပိုက်ဆံမရှိပေ။ လူ့ဘဝရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ထဲမှာ ပါနေတဲ့ နေစရာဆိုတာ တစ်ချို့တွေအတွက် ပျော်စရာကောင်းအိမ် ဖြစ်နိုင်သလို တချို့တွေအတွက် စိတ်ညစ်စရာတွေ စုပြုံနေတဲ့ အိမ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နန်းကျောင်းသွားတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ရှိနေတဲ့ အိမ်လေးတွေကို ငေးရင်းသိမ်ငယ်မိတတ်သလို အိမ် (သို့) နေစရာ မရှိတဲ့ လူတွေလည်းရှိနေတာပဲလို့ နန်း ဖြေသိမ့်မိပါတယ်။ အဲ့ လို အိမ်မရှိတဲ့ သူနဲ့စာရင် နန်းတို့ရဲ့အဖြစ်ကတော်ပါသေးတယ်။ ဂေဟာမှူးဆုံးမထားတဲ့အတိုင်း “ ကိုယ့်ထက်အပေါ်ပဲ ကြည့်ပြီး ဝမ်းမနည်းကြနဲ့ အောက်လည်းပြန်ကြည့်တတ်ဦး“ တဲ့။ နန်းတို့လိုဂေဟာကကလေးတွေလည်း ဂေဟာမုှူးအဲ့ လိုဆုံးမစကားတွေနဲ့ ကြောင့် အရမ်းမခံစားရဘဲ ကျင့်သားရလာကြပါပြီ။ ဂေဟာကိုခုတလောမှ ရောက်လာတဲ့ မွေးကာစကလေး ဖိုးသားတို့၊ (၃)နှစ်နဲ့ရောက်လာတဲ့ သုန်သုန်လေးတို့ မျက်နှာလေးမြင်ယောင်လာသည်။ နန်း နှင့် နောင့် မှာ အနည်းဆုံးတော့ အိမ်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်လေ။ အမှတ်တရလည်းရှိခဲ့တယ်။ နွေးထွေးမှုး၊ ကြင်နာမှုး၊ ဂရုစိုက်မှှု့တွေ အနီးကပ်ခံစားဖူးတယ်၊ နားခိုစရာအိမ်ရှိခြင်းအကြာင်းကိုလည်းနားလည်ခဲ့ပီ။ လုံးဝမရဖူးတာနဲ့စာရင် အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုထိ နည်းနည်းလောက် ခံစားခွင့်ရခဲ့တာကိုပဲ ကျေနပ်နေပါပီ။ ဂေဟာမှာလေ အိမ်ဆိုတာ ဘာမှန်းကိုမသိတဲ့ ကလေးတွေရှိတယ်။ အဲ့လိုကလေးတွေအများကြီးအတွက် နန်းနွေးထွေးတဲ့ အိမ်ကလေးဖန်တီးပေးချင်လိုက်တာ။ ထမင်း၊ဟင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံ ၊ခုလိုတော်တဲ့ ကလေးတွေပဲ ကျောင်းထားပေးတာမဟုတ်ဘဲ ကလေးတွေအကုန်ကျောင်းတက်လို့ရအောင် လုပ်ပေးချင်လိုက်တာ။ နွေ၊မိုး၊ ဆောင်း ဥတုသုံးပါးအတွက် ဝတ်စရာရှိစေချင်တာ။ သရေစာလေးတွေစားဖို့ မုန့်ဖိုးလေးတွေပေးချင်တာ။ အဲ့လိုတွေလုပ်ဖို့ရာ နန်းမှာ ပိုက်ဆံရှိပြီး အိမ်ပိုင်ဝယ်ဖို့လိုသည်။ “ အိမ်ဝယ်နိုင်ဖို့ နန်း စာကြိုးစား၊ အလုပ်လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံရှာရမည်တဲ့”ဂေဟာမှူးကပြောဖူးသည်။ အသက်၁၆နှစ်သာရှိပေမဲ့ ဒီလိုမျိုးကိုယ်ကိုကိုယ်နှစ်သက်တတ်လာတာဟာ အိမ်နဲ့ အစောကြီးဝေးကွာခဲ့ရတာကြောင့် ဖြစ်မည်။ အိပ်ပုပ်ကြီးတဲ့ နန်းတစ်ယောက် မနက်အစောကြီးထပြီး ဂေဟာအလုပ်တွေလုပ် ပင်ပန်းခံနိုင်တာနောင့်ကြောင့်ဖြစ်မည်။ စာကြိုးစားလို့ မှဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ ပြောပြော မကြိုးစားတဲ့ ငပျင်းမ “နန်းမော်” တစ်ယောက်အတည်းထဲ့မှာရော ဂေဟာမှာပါ အတော်ဆုံးဖြစ်လာတာဟာ “ကိုယ်ပိုင်အိမ်” ပိုင်ဆိုင်လိုသော အိမ်မက်ကြောင့်ဖြစ်မည်။ “အိပ်ကြတော့ အိပ်ကြတော့” ဟူသောဂေဟာမှူးအသံနဲ့အတူ အိပ်ဖို့ပြင်ဆင်ရပြီ။ မအိပ်ခင်ကလေးအားလုံးအတူတူ ဘုရားစာရွက်ရသည်။ မနက်စောစောထပြီးထမင်းချက်ရမည့် တာဝန်ရှိသည်။ အိပ်မှရမည်။ ဘေးမှာအိပ်နေတဲ့ နောင့်ကို ဖက်ထားပြီး “ငါတို့အတွက် လွပ်လတ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးပိုင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်”လို့တွေးရင်း———–။အိမ်မက်ထမက်တယ်။မက်နေကျအတိုင်းပဲ။ ပေါ့ရယ် မှဲ့ရယ် အရင်နန်းတို့အိမ်လေးဆီကို လာဖို့ခေါ်နေတယ်။စစ်ပွဲတွေပြီးသွားပီတဲ့။ရွာငြိမ်းချမ်းသွားပီတဲ့လေ။ လူတွေရဲ့အိမ်မက်တိုင်းတကယ်ဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းရင်း —— တစ်နေ့တာ တာဝန်တွေလုပ်ဆောင်ဖို့ အိပ်ရာမှလူးလိမ့်ထရင်း ။ နန်းမော်ရဲ့ အိမ်မက်နှစ်ခုလည်း တကယ်ဖြစ်လာမှာပါလို့ ယုံကြည်ရင်း—–ကြိုးစားရင်း—-။
Written by NanolabsFebruary 2, 2022
(2nd Round) Winner – PK
Feminist Literature Competition
” ကျွန်မ နဲ့ ကျွန်မအိမ် ” မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက်ရယ်လို့ ဆိုခဲ့တဲ့ ရှေးအဆို။ မီးဖိုချောင် ထမင်းဟင်းချက်တာ မယ်တို့တာဝန်။ မှီခိုတဲ့စာရင်း ထဲ့မှာတော့ မယ်တို့ပါဝင်။ နွားမတောင် အလှည့်ကျရင် ရုန်းကန်ရတာမို့။ မောင် နဲ့ မယ် အလုပ်လုပ်မှ တော်ရုံတန်ပေ။ အဝတ်လျှော် မီးပူတိုက်တာ နေ့စဉ်တာဝန်။ ရုံးချိန်မှီ ထမင်းဟင်း ချက်ကာ မယ်ကပြင်ဆင်။ အားကိုးရ ယောကျာ်းကောင်းက အိပ်ပျော်နေစဉ်။ ကျောင်းပို့ကာ အလုပ်မသွားခင် မိခင်တာဝန်။ ပညာတတ်မောင့် အတွက်တော့ ရုံးလုပ်ငန်းတွင်။ ကျောင်းမတတ် မယ်အတွက်တော့ အထည်ချုပ်ခွင်။ အိမ်ရောက်နားရမယ် မထင်နှင့် ကလေးခါးထစ်ခွင်။ ယောကျာ်းကောင်း မောင်းမတစ်ထောင်မို့ ဖောက်ပြန်နေချင်။ မိန်းမကောင်း ပန်းတစ်ပွင့်သာ ပန်ဆင်ရစဉ်။ အသဲစွဲ အရိုးကွဲအောင် ရိုက်ခံနေစဉ်။ ကုသိုလ်ကံ မကောင်းခဲ့တာမို့ မိန်းမဘဝတွင်။ မမြင်ရ အရင်ဘဝနဲ့ နှိမ်ခံနေစဉ်။ လူဖြစ်စဉ် တစ်ခဏအတွင်းမှာ အရာမဝင်။ တစ်နေ့တာ အိမ်အလုပ်က ပင်ပန်းလှစဉ်။ ဖောက်ပြန်တဲ့ အိမ်ဦးနတ်အတွက် ခူးခပ်ပြင်ဆင်။ ကျမ နဲ့ ကျမအိမ်မို့လို့ တည့်မြဲဖို့တာဝန်။ မယ့်တာဝန် … မယ့်တာဝန်။ ပီကေ (PK)
Winner – မှုံပဒုံ (Feminist)
“အိမ်”ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့လိုက်ရင် ကျမအရင်ဆုံးကြားယောင်မိတာက “နှလုံးသားတွေနွေးထွေးရင် ဒါဟာလည်းအိမ်” ဆိုတဲ့သီချင်းစာသားလေးပါပဲ။ အဲ့လို သိပ်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တတ်တဲ့ ကျမအတွက် နှလုံးသားလေးကို နွေးထွေးစေတဲ့အိမ်လေးကတော့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကောင်ကြွက် တစ်မျက်နှာ ဖြစ်တဲ့ ကျမက အိမ်ဆိုတဲ့အရာ ကို သေချာ မခံစား မတွေ့ကြုံ့ဖူးတော့ ကျမ သိပ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ကဆုံလာရတဲ့အခါ သူက ကျမရဲ့ အိမ်လေးဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာ ပုံပြင်တွေထဲ့ကလို ဇာတ်သိမ်းလှလှလေးဖြစ်သွားပြီလို့ ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ ကျမချစ်ရသော ကျမကိုချစ်သော လူတစ်ယောက်ကိုပဲ ကျမရဲ့နားခိုရာအိမ် အပန်းပြေမဲ့အိမ် လို့ပဲမှတ်ပြီး နေလာခဲ့တယ်။အပြင်လောကမှာလို ဟန်ဆောင် မျက်နှာဖုံးတပ်စရာမလို ကျမကိုယ်ကျမအရှိအတိုင်း ခံစားချက်အတိုင်းနေလို့ရမဲ့နေရာအဖြစ်မှတ်ယူပြီး ကျမပျော် ခဲ့တယ်။နွေးထွေးတဲ့ကျမအိမ်လေးကို အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားပြီး ပျော်နေခဲ့ပါတယ်။ အိမ်လေး ပျော်အောင်လည်း ကျမကကြိုးစားပြုပြင်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ နေလာရင်း ကျမအိမ်လေးက ပြောင်းလဲ လာပါ တော့ တယ်။ ကျမကို ကျမပုံစံကနေသွေဖည်ပြီး တခြားပုံစံသွင်းလာတယ်။ အချိန်တစ်ခုကကြာလာတော့ ကျမဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကျမလို့မခံစားရတော့ဘဲ ကျမချစ်ရတဲ့လူအကြိုက် လိုက်နေနေရတာကို ခံစားမိလာတယ်။ အသေးဖွဲ့လေးတွေကအစ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိရတော့ဘူး။ ချုပ်ချယ်မှု့တွေကြောင့်ကျဉ်းကျပ်လာခဲ့တယ်။ ချစ်လို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ ကျမရဲ့ ဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ရွေးချယ်မှု့တွေကိုပါ စွက်ဖက်ခံလာရတော့တယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နှလုံးသားမှာနွေးထွေးမှုမရှိတော့ဘူး။ အိမ်လို့မခံစားရတော့ဘဲ ကျမလှောင်အိမ်ထဲရောက်နေသလို ခံစားလာရခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကျမကိုယ်ကျမ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရအောင် ပြောခဲ့ပေမဲ့အပိုအလုပ်တွေ ဆိုပြီး ကျမဆန္ဒကို ဘေးချိတ်ခံခဲ့ရပါတော့တယ်။ ကျမရဲ့ အိမ်လေးလို မှတ်ခဲ့တဲ့သူက အိမ်နဲ့မတူဘဲ အရမ်းဝေးကွာနေတယ်လို့ တဖြည်းဖြည်း သိလာခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘေးစကားတွေက ကျမကပဲ သည်းခံသင့်တယ်၊ ကျမကပဲ ဒီအိမ် ထောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရမှာပေါ့ အဲ့လိုမျိုးတွေ ကြားရဖန်များလာတော့ ကျမ နားယောင်ခဲ့မိတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ကျမဟာ အဲ့လိုဖိနှိပ်ခံရတာကို အသားကျလာသလို ဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှု့နဲ့ကိုယ်ခံရတာ တန်တယ် ကြိတ်ခံသင့်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေပါဝင်လာပါတော့တယ်။ကိုယ့်အစွမ်းအစကိုလုံးထုတ်သုံးလို့မရအောင်အနှိပ်ခံရပြီး တဖြည်းဖြည်းသိမ်ငယ်လာတဲ့ အဖြစ်ကို ကျမနေသားကျလက်ခံမိသွားတယ်။ ကျမတန်ဖိုးထားရတဲ့ နှလုံးသားအိမ်လေး ပျက်ဆီးသွားမှာ ကြောက်တဲ့ စိတ်တွေကပါကြီးစိုးနေခဲ့တယ်။ အဲ့လိုနဲ့ကျမဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပျောက်ကွယ်မှန်းမသိ ပျောက်ကွယ် လာပါ တော့ တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ့်ထိလက်ရောက်နှိပ်စက်ခံရမှုတွေကြောင့် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပင်ပန်း လာပါတယ်။ ကျမရဲ့အိမ်လေးက ကျမစိတ်ကူးခဲ့တဲ့အိမ်လေးနဲ့မတူတော့ဘဲ ပူလောင်မှုတွေများလာပါတော့တယ်။ ကျမ သိလိုက်ရတာက ကျမအိမ်လေးဆီမှာ နေနေတာမဟုတ်ဘဲ ငရဲ ကျနေတာပါ။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျမ စိတ်တွေ လွန်ဆွဲလာခဲ့ပြီး နောက်မှာတော့ သူ့စကားလုံးကြမ်းကြမ်းတွေ ကျမကိုစိတ်အားငယ်အောင် တမင် ပြောဆိုတာတတွကို ကျမနားထောင်စနေစရာ မလိုဘူး ကျမခန္ဓာကိုယ်ကို သူနှိပ်စက်တိုင်း ခံနေစရာ မလိုတော့ဘူး လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တော့တယ်။ ဒီငရဲခန်းကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင် ကျမ လုပ်နိုင်တာကတော့ တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီကနေထွက်သွားဖို့ ပါပဲ။ ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးတဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျမ နှလုံးသားလေး မနွေးထွေး မပျော်ရွှင် နိုင်တော့တဲ့ အိမ်ကနေ ကျမ ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကျမ လွတ်လပ်ပေါ့ပါး သွားပါပြီ။ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ကိုယ်ပိုင်ဘဝ နဲ့ ကျမကိုယ်တိုင် လျှောက်လှမ်းဖို့သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ မိန်းမဆိုတာ အမြဲတမ်း အားငယ်တယ်၊ မိန်းမဆိုတာ မှီခိုအားကိုးရာ ရှာရမယ်ဆိုတဲ့ စကားတွေကို သွေဖည် ပြီး အားမငယ်ဘဲ အားကိုးရာမရှာတော့ဘဲ ကျမကိုယ်ကျမ ရပ်တည်နိုင်တည်ဆိုတာကို ပြနိုင်ပါပြီ။ ။ နှလုံးသားလေးနွေးထွေးဖို့အိမ်ကို တခြားအရာ တခြားသူဆီမှာ မရှာတော့ဘဲကိုယ့်ကိုယ်တိုင်မှာရှာဖို့ ဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လား။ ဟုတ်ကဲ့ ကျမအတွေက် ကျမရဲ့အိမ်က ကျမကိုယ်တိုင် ပါပဲရှင်။ မှုံပဒုံ (Feminist)
Winner – Giselle Mae
အိမ်ဆိုတာ သက်မဲ့အဆောက်အအုံတစ်ခုသက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မကို လုံခြုံစေ နွေးထွေးစေတဲ့လူပုဂ္ဂုလ်တွေ အရာဝတ္ထုတွေရှိတဲ့နေရာဟာ ကျွန်မအိမ်ပဲ။ ကျွန်မ မိသားစုဟာ ကျွန်မအိမ်၊ ကျွန်မနှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ အလုပ်ဟာ ကျွန်မအိမ်၊ ကျွန်မ ချစ်ရသူ ရင်ခွင်ဟာ ကျွန်မအိမ်။သူတိုအ ကုန်ကျွန်မအပေါ်ကောင်းကြပါတယ်။ ချစ်ခင်ပေးကြတယ်၊ ဂရုစိုက်ပေးကြတယ်၊ပံ့ပိုးပေးကြတယ်၊ နားလည်ပေးကြတယ်။ များသောအားဖြင့်ပေါ့ ××× “ဟဲ့ ညည်းတိုအိမ်ကလည်း ရှုပ်ပွ နေတာပဲ ။ အမေ့ကို ကူလုပ်ပေးအုံးလေ.. ညည်းတိုသားအမိ နှစ် ယောက်နဲ့တော့ခက်တော့တာပဲ ” အဘွားက အိမ်လာလည်ရင်အဲ့လိုအမြဲဆူ တတ်တယ်။ “ဟုတ်. သမီးက စာတွေ များလို ကူမလုပ်ပေးဖြစ်တာ.. အမေကလည်း အလုပ်က နောက်ကျမှပြီးတာ..” “ငါတိုတုန်းလည်ဒီလိုပဲလုပ်ရတာပဲ ။ မိန်းကလေးဆိုတာ အိမ်မှုကိစ္စနိုင်နင်းရတယ်။” “အိမ်မှာ မောင်လေးတို အဖေ တို့လဲရှိတာပဲ” “သူတိုက ယောကျာ်းလေးတွေလေ .. ဘယ်လုပ်တတ်ပါ့မလဲ . ဒါငါတို့မိန်းကလေးတွေတာဝန်” အိမ်မှာ ဘာလို့အမေနဲ့ကျွန်မပဲ တာဝန်ရှိသူဖြစ်ရတာလဲဆိုတာ ကျွန်မကောင်းကောင်းနားမလည်။ ဒါပေမဲ့လည်း.. ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ .. ကျွန်မတို့က မိန်းကလေးတွေပဲ ။ ××× “ အမေ မန္တလေးကို ရာထူးတိုးပြောင်းရမယ်ဆို?” “အေး.. ဒါပေမဲ့ မဖြစ်ပါဘူး သမီးရယ်..” “ဟယ်ဘာလိုလဲ့ .. အမေ ရာထူးတိုးသွားမဲ့ဟာ” “အိမ်မှာ အမေ မရှိလို့မှမဖြစ်ဘဲ … သမီးတစ်ယောက်တည်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး” အင်းနော်.. အမေက အိမ်မှာ မရှိလို့မှမဖြစ်ဘဲ။ အမေက မိခင်ကောင်း.. ဇနီးကောင်း.. မိသားစုကို မပြိုကွဲအောင်စောင့်ရှောက်ရမယ်… “အမေ မနေ့က ပြောတဲ့အလုပ်မလျှောက်ဖြစ်ဘူးလား?” “အေးကွယ်.. အမေ့မှာ အဲ့ရာထူးအတွက် အတွေ့အကြုံလဲမရှိ .. သူများတွေလို certificateဘာညာတွေလဲ ကောင်းကောင်းရှိတာမဟုတ်ဘူး..” ဟုတ်သားနော် .. အမေကသူ့တက်လမ်းတွေ အတွက်ပေး စရာအချိန်မှ မရှိခဲ့ဘဲ.. ××× “လမ်းထိပ်မှာ စာအုပ်သွားငှားမလို့ အမေ ” “ဟဲ့ ဟဲ့ နေ အုံးလေ။ မသွားရပါဘူး မိန်းကလေးတန်မဲ့ တစ်ယောက်တည်း ရပ်ကွက်ထဲမှာက လူပေါင်းစုံနဲ့ ။နောက်မှ မောင်လေးကိုခေါ် ပြီးသွား” “သမီးစာမေးပွဲ ပြီးရင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခရီးသွားချင်လို့” “လူကြီးတွေလဲမပါဘဲနဲ့ သမီးမိန်းကလေးကို အဲ့လိုမလွှတ်နိုင်ပါဘူး .. မိန်းကလေးတန်မဲ့” “အဖေ.. သမီးမနေ့ကပြောတဲ့ Volunteer အစီအစဉ်သွားလုပ်လို့ရမလား” “အဆင်မပြေပါဘူး..သမီးတို့သွားလုပ်မဲ့ နေရာက လူပေါင်းစုံနဲ့… စိတ်မချရဘူး” “အဖေကလည်း.. မောင်လေးတာင် နေရာစုံလျှောက်သွားဖူးနေပြီကို” “ညည်းက မိန်းကလေးလေ.. မတူဘူး။ ယောကျာ်းလေးနဲ့ မိန်းကလေး” “သမီးဆယ်တန်းပြီးရင် mechanical engineering တက်ကြည့်ချင်တယ်” “ဟယ်.. မိန်းကလေးနဲ့စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ မလိုက်ပါဘူးအေ.. ဆေးကျောင်းတက်ပါလား” “မောင်.. မေ မြဝတီဘက်မှာ Project Manager အဖြစ် ရာထူးတိုးပြီးသွားလုပ်ရမယ်” “အဝေးကြီး မေရယ်. မိန်းကလေး တန်မဲ့ စိတ်မချဘူး။ လစာမတိုးလည်းနေပါစေ .. ကိုရှာကျွေးပါ့မယ်” ဟုတ်သားပဲ. ငါကမိန်းကလေး ယောကျာ်းလေးနဲ့ မိန်းကလေးမှ မတူတာ။ သူတို့က ငါ့ကိုချစ်လို့ ပြောကြတာနေမှာပါလေ။ ××× “ဆရာ.. မေ ဆရာတို့ မန္တလေးရုံးခွဲသစ်အတွက် Regional Manager position လျှောက်ချင်လို့ပါ” “သြော် .. ဟုတ်ပြီ.. သမီး .. ဆရာ သမီး CV ယူထားလိုက်မယ်” ဒါပေမဲ့ ကျွန်မနဲ့အတူတူ အလုပ်ဝင်လာတဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်း သီဟကပဲ မန္တလေးကိုရောက်သွားတယ်။ “အခုမှ အကုန်အစအဆုံးစရမှာဆိုတော့ ယောကျော်းလေးနဲ့ ပိုအဆင်ပြေတယ်ထင်လို့ဆိုလားပဲ.. stress များမှာတွေရော လုပ်ရကိုင်ရ ပင်ပန်းမှာဆိုတော့” “သြော်.. အင်းနော် .. ဟုတ်သားပဲ .. ငါက မိန်းကလေးဆိုတော့..” အဖေတို့ အမေတို့ အဘွားတို့ပြောခဲ့သလိုပေါ့။ “ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းကလေးတူမလား” “ယောကျာ်းလေးတွေကပို ပိုက်ဆံရှာရလွယ်တယ်လေ” ××× ကျွန်မမှာ အိမ်လေးတွေရှိတယ်။ သူတို့ကျွန်မကိုချစ်ကြတယ်၊ ဂရုစိုက်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ”မိန်းကလေးဆိုတော့စိတ်မချလို့” အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ကျွန်မတို့ ပိတ်လှောင်ခံခဲ့ရဖူးတယ် ။ “မိန်းကလေးဆိုတာ..” လိုအစပြုတတ်တဲ့စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ ချည်နှောင်ခံခဲ့ရဖူးတယ်.ချုပ်ချယ်မှုတွေကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာတစ်ခုလိုကျေကျေနပ်နပ်ခံယူတတ်လာကြတယ်။ အခုခေတ်မှာအရင်ခေတ်ကလိုမိန်းကလေးတွေကိုအိမ်ထဲမှာပိတ်မထားကြတော့ပါဘူးတန်းတူအခွင့်ရေးပေးပါတယ်လို့ပြောကြမှာပေါ့လေ။ ဟုတ်ပါတယ်.. ကျွန်မတို့ အစအဆုံးမရှိတဲ့ အခွင့်ရေးတွေကို စိတ်ကူးယဉ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ စိမ်းစိုနေတဲ့ မြက်ခင်းပြင်တွေ… ပြာလဲ့နေတဲ့ ကောင်းကင်ပြာတွေ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ရောက်နေတာဟာ ဖန်လုံအိမ်လေးတွေထဲ့မှာ။ ကျွန်မချစ်တဲ့မိသားစု၊ ကျွန်မမြတ်နိုးတဲ့အလုပ်ခွင်၊ ကျွန်မ ချစ်သူရဲ့နွေးထွေးတဲ့ ရင်ခွင်။ ဒါတွေဟာတကယ်တမ်းမှာ မရည်ရွယ်ပါဘဲနဲ့လည်း ဖန်လုံအိမ်လေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ တကယ်တမ်း ကျွန်မတို့ ထွက်ပြေးဖို့ ပျံတက်ဖို့ အားယူလိုက်တဲ့ အချိန်မှာရော ကျွန်မတို့မှာ အနှောင်အဖွဲ့ကင်းရဲ့လား? အတားအဆီးကင်းရဲ့လား? ဖန်လုံအိမ်တွေအပြင်ဖက်မှာ ကျွန်မတို့အတွက်အန္တာရာယ်တွေများတာ ကျွန်မလက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်ကပဲ ဖန်လုံအိမ်တွေ ဖြစ်လာအောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းက တွန်အားပေးခဲ့ကြတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အသေးအဖွဲ့ကိစ္စလေးတွေက စလို့ ခေတ်အဆက်ဆက်ကျွန်မတို့တွေဟာ ဖန်နံရံတွေ ပြိုမကျအောင် ၊ မကွဲအက်အောင်ထပ်ထပ်ပြီး အားဖြည့်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်မတို့ကို စွန့်စားခွင့်တွေ၊ အမှားလုပ်ခွင့်တွေ မပေးရင် ကျွန်တို့ဘယ်တော့မှာ အနှောင်အဖွဲ့ကင်းကင်း ရပ်တည်နိုင်တော့မှာပါလဲ?ကျွန်မတို့မှာ ခေါင်းဆောင်ဖို့အခွင့်ရေးတွေ ဘယ်တော့မှ ရပါတော့မလဲ? ကျွန်မတို့အချင်းချင်း “မိန်းကလေးတန်မဲ့”ဆိုတဲ့” စကားတွေနဲ့ မျက်စောင်းထိုးကြ အတင်းပြောကြအုံးမှာလား? ကျွန်မတို့မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေအတွက်ဖန်လုံအိမ်တွေထပ်ဆောက်ဦးမလို့လား? အဲ့ဒီ အစား.. ကျွန်မတို့အားလုံး အတောင်ညောင်းတဲ့အထိ လွပ်လွပ်လတ်လတ် ပျံသန်းခွင့်ရမယ့် အသိုက်အမြုံလေးတွေ ဆောက်ကြမယ်ဆိုရင်ရော? ဆူးပေါ်ဖက်ကျဖက်ပေါက် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီးနဲ့မဖိနှိပ်ထားဘဲ ကျွန်မတို့ရဲ့နုနယ်တဲ့ ဖက်ကလေးတွေ ပေါက်ပြဲသွားရင်တောင် ဖာထေးခွင့်ရမဲ့နေရာမျိုး… ကြက်ဖ တွန်တွန်၊ ကြက်မ တွန်တွန် မိုးကတော့ သူအလိုလို လင်းမှာပဲ ဆိုတဲ့အမှန်တရားကို လက်ခံမယ့်နေရာမျိုးပေါ့။
Round33
Round Four 3
Round One 5
Round Two 9
WINNER – Lin Htet @ DrawZilla (artwork)
Featured Selection – “ Zaw ”
Featured Selection – ” Vera “
App Branding Design Development featuresfive featuresfour Innovation r1w roundtwofeatures roundtwowinner Startup winnerfive